Mastiff: fantaro ny toetra sy fikarakarana an'io karazany io | Tontolo alika
Ity karazany ity dia heverina ho tokana noho ny fahaizany feno herim-po sy be fitiavana amin'ireo tompony, tena tsara toy ny amboa mpiambina, noho izany zatra mitahiry trano lehibe. Ny maha-ilaina azy dia avy amin'ny zava-misy fa tena anoroana azy ho alika hitazona orinasa noho ny toetrany.
Nandritra ny taonjato maro, ny mastiff dia niaraka tamin'ny andian'ny ondry miaro omby amin'ny fanafihan'ny amboadia. Liana amin'ity karazana ity ve ianao? Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity raha te hahalala momba ireo lafin-javatra lehibe indrindra mifandraika amin'ity olana ity.
Arak'izay efa voalazantsika teo, miaro fotsiny ny asany. Fantatra amin'ny anarana hafa koa izy io, miankina amin'ny faritra jeografika misy azy, alika omby iray ny iray amin'izy ireo.
Mahaliana ny fahafantaranao zavatra momba ny tantaran'ity hazakazaka ambony ity ary izany dia tamin'ny 1981 ny Fikambanan'ny Espaniola an'ny Alika Mastiff Espaniola.
Ity fikambanana ity dia nanana ny hevitra handaminana a programa hanangonana vaovao momba an'io karazany io tamin'ny andro taloha. Izany no antony namoronany endrika vaovao mba hamerenana amin'ny laoniny ny fampahalalana rehetra miresaka momba ny alika omby taloha.
Manana ireo toetra mamaritra azy ireo izy ireo ary manome azy ireo ny maha izy azy, izany hoe Izy ireo dia karazana azo ampiasaina amin'ny alika mpiambina na alika mpiambina.
Hofintininay eto ambany ny sasany amin'ireo toetra sy toetra manintona tena manintona azy:
Izy io dia miavaka amin'ny alika lehibe, tena matanjaka, matanjaka be ary be hozatra. Voalaza momba an'io fa Io no karazany lehibe indrindra hita any Espana.
Hazakazaka tsy azo itokisana izy io, mafy orina eo imason'ny olon-tsy fantatra ary tena azo antoka ny tenany. Ny volony dia matevina ary manana karazam-bolo volom-borona manome endrika akanjo ambany, izay very mandritra ny fahavaratra.
Raha ny lokony, ny fotsy, ny mainty ary ny brindle dia mahazatra kokoa. Ny halavany dia 60 sy 80 cm miankina amin'ny lahy na vavy. Eo anelanelan'ny 40 sy 70 kilao ny lanjany na mety hahatratra 90 kg aza izy ireo.
Matetika izy ireo dia ampiasaina hikarakarana ny biby fiompy ary koa toeram-piompiana sy fananana. Toy ny mahazatra, mandanjalanja tokoa izy ireo, izay mampiavaka azy ireo ho alika mpiara-miasa tsara. Ny salanisan'ny androm-piainana dia eo anelanelan'ny valo ka hatramin'ny folo taona ary ny tontolo iainana dia azo lazaina fa mifanaraka tsara amin'ny fianakaviana, amin'ny tontolo ambanivohitra, ny fiompiana ary / na ny fanaraha-maso.
Azo lazaina momba azy fa izy no iray amin'ireo karazany lehibe indrindra ananan'i Espana. Misy fisalasalana momba ny niandohany sy ny porofoiny, saingy misy ny angona tantara izay manakaiky ny zava-misy; tonga tany amin'ny firenena tamin'ny alàlan'ny Fenisianina sy ny Selta ary nampiasan'ny Romana ho alika mpiady izy ireo.
Ny tsy misy isalasalana dia hoe tamin'ny Moyen Age dia nahasoa azy ireo ho mpiambina ny omby. Amin'ny ankapobeny, ny toetrany dia an'ny a mitombo haingana, matanjaka ary mahay miaro ny omby avy amin'ny biby hafa raha mahatsapa fandrahonana ianao.
Ny alika Espaniola Mastiff dia matanjaka, lehibe ary maty. Ny tongony dia mailaka, mavesatra ary mahery. Manana loha be dia be izy, floppy sofina ary ny hoditry ny tavany mihantona amin'ny masony sy ny takolany.
Rakotra volo tena matevina ny vatana iray manontolo. Raha ny loko, ny mahazatra indrindra dia ny loko matevina sy brindle.
Mora ny fikojakojana azy ary mila fanatanjahan-tena betsaka, noho izany torohevitra ny hipetraka amin'ny trano lehibe. Aza atao ambanin-javatra ny fitaintainany noho ny tsy fahampian'ny fanatanjahan-tena.
Ny fanosorana dia asaina manala ireo làlan'ny loto sy volo maty rehetra. Zahao isaky ny fitsangantsanganana ny parasy sy ny tapakila ary rehefa mandro ianao dia tandremo ny sofiny.
Amin'ny maha-karazana habe matanjaka azy, dia mitandrina izy mba hahitana aretina toy ny dysplasia hip. Tsy maintsy mihinana sakafo voalanjalanja ianao, miaraka amin'ny otrikaina ilaina amin'ny fandevonan-kanina tsara; hikarakara ny vaksiny ary manatrika tsy tapaka ny mpitsabo biby izy.
Tokony hodiovinao ihany koa izy amin'ny fatra amporisihan'ny manam-pahaizana manokana azy. Ny katsentsitra dia mihinana amin'ny ampahany amin'ny vatanao, miteraka ratra mivantana izay mety hiteraka fivalanana, fihenan-danja, fandoavana ary koa azo atsahatra ny fantsona tsinay.
Mila mihevitra ny marina ianao ary deworming sahaza miaraka amin'ny fanafody natao ho an'ny biby fiompy.
Ity karazana ity dia mitaky fihinanana kaloria somary avo noho ny habeny, ary koa fanatanjahan-tena misy ny endriny matanjaka, noho izany laharam-pahamehana ny fikojakojana azy ary ny tolo-kevitra marim-pototra rehetra dia tsy maintsy arahana.
Miankina amin'ny maha mbola alika azy io, nanolorana azy ho tokony hihinana ny sakafony ampahany kely sy amin'ny fotoana samy hafa farafahakeliny intelo isan'andro, fa tsy rehefa tadiavin'ilay biby, dia ny mampazoto azy amin'ny fifehezana amin'ny fahazarany mihinana.
Toy izany koa sy ao anatin'ny soso-kevitra tsara ny fihinanana antioksidasatria tena ilaina izy ireo mba hitazomana ny akanjo palitao. Toy izany koa, omeo azy ireo proteinina sy sakafo rehetra miaro ny tonon-taolana.
Satria manana olana amin'ny hatavezina izy ireo, dia mila mijery ny lanjany sy ny tsy fanjarian-tsakafo hafa ianao. Araho maso amin'ny mpitsabo anao koa ny consultations nataonao, dia hanome anao orientation tsara kokoa ianao ny fivoaran'ny Mastiff.
Aza mieritreritra ny hampihetsi-po na hitondra an-tongotra rehefa avy misakafo, fa tsara ny miandry ny ora marim-pototra mba hahafahany mandevona tsara, satria raha tsy izany dia mety hiteraka olana izany.
Tokony hoentinao mandeha an-tongotra farafahakeliny im-betsaka isan'andro izy, dia ho an'ny fahasalamanao sy ny fiainanao ara-batana. Azoko atao ny manome toky anao fa amin'izany dia hifehezana ny lanja sy ny fandevonan-kanina ny alikanao ianao.
Arovy amin'ny parasy izy, apetraho amin'ny mpitsabo anao ny fandaharam-potoana fanaovana vaksiny. Ity karazana ity dia mitaky fifantohana betsaka, ny fahatsapana ho irery na ny tsy fanolorana fitiavana dia mety hiteraka fihetsika ratsy ary hiteraka olana ara-tsaina aza.
Ny iray amin'ireo olana ara-pahasalamana aseho ato amin'ity gazety ity dia ny displasia hip, izay mety miteraka fanaintainana anao ary mety ho malemy aza ianao. Efa fantatrao fa azonao atao ny manamaivana azy amin'ny fanatanjahan-tena, fanatanjahan-tena, sakafo ary fandehanana.
Tandremo sao misy olana mamily kibo. Raha mitandrina ianao fa ny fihinanana sakafo dia misy ampahany kely imbetsaka isan'andro, dia hitandrina ny fahasalamany sy ny fahasalaman'izy ireo ianao.
Ny Espaniola Mastiff noho izany Alika lehibe sy matanjaka izy io, mahatoky amin'ny tompony tokoa ary tena tia ny ankizy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Taranaky ny alika » Mastiff
Terrier omby anglisy